Tolotra ho an’ny mpandraharaha : andrasan’ny BNI ny fanomezana karatra ho an’ny tantsaha | NewsMada
Tolotra ho an’ny mpandraharaha : andrasan’ny BNI ny fanomezana karatra ho an’ny tantsaha
Nampahalala sy mampitombo hatrany ny tolotra ao aminy ny BNI Madagascar, amin’izao taona 2018 izao. Manana tolotra ho an’ny sokajin’olona rehetra ity banky ity, manomboka amin’ny tanora, mpiasa rehetra, mpandraharaha sy ireo efa misotro ronono. Nosoritan’ny tompon’andraikitra iray fa tafiditra anisan’ny mpandraharaha ny tantsaha, amin’ny maha tantsaha azy. Izany hoe, raha tena mivelona amin’ny fambolena sy ny fiompiana. « Toy ny mpandraharaha rehetra sy ireo manana antom-pivelomana manana ny rafitra mifehy azy, ohatra, ny mpitatitra, teknisianina amin’ny asa vaventy, mpitrandraka harena ambanin’ny tany, mpitsabo, mpisolovava, sns, tokony manana rafitra toy izany koa ny tantsaha. Andrasana amin’ny minisiteran’ny Fambolena sy ny fiompiana ny fanomezana karatra azy ireo », hoy ny talen’ny fifandraisana ao amin’ny BNI, Ralaimanisa Ndrina.
Manome tosika an’ireo matihanina amin’ny sehatra misy azy, anisan’izany ny tantsaha, ny BNI amin’ny alalan’ny tolotra « Pack pro » natokana ho an’ny orinasa madinika sy salantsalany (PME). « Amin’ireo masoivohon’ny BNI miisa 72, any amin’ny faritra ny 43. Izany hoe, manakaiky kokoa ny tantsaha”, hoy ihany Ralaimanisa Ndrina, manamafy fa ho an’ny sokajin’olona rehetra ny tolotra ao amin-dry zareo.
Entanina manokana ny mpiasam-panjakana
Entanina manokana koa ny mpiasam-panjakana rehetra sy ireo efa misotro ronono, hiditra amin’ny banky, hampiakarana ny tahan’ny fampiasana banky eto amin’ny Nosy. Akaiky indrindra amin’izany ny mpiasam-panjakana. Nanaovana atrikasa momba azy ireo, ka izy ireo ihany ny handrafitra paikady hisarihana ny namany, hahitan’izy ireo tombontsoa amin’ny fananana petra-bola amin’ny banky.
Raha zahana ny taona 2017, 150.000 ny olon-tsotra mpanjifa ao amin’ny BNI, ka mpiasam-panjakana ny 243.000 ; 11.318 ny mpandraharaha na ny PME. Any amin’ny fanjifana ny findramam-bola be indrindra tao amin’ny amin’ny BNI, 80 %. Ny ankoatra izay findramam-bola ho an’ny fandraharahana sy ny fanaovan-trano. Fehiny : mbola tsy any amin’ny fampiasam-bola mampihodina ny toekarena izany ny ataon’ny maro anisa.